Cirbadda Ururinta Dhiiga, Isticmaalayaasha Shaybaarka, Weelka Kaadida - Kang Weishi
Shijiazhuang Kang Weishi Medical waxaa loo aasaasay 2014 isagoo ah soo saare iyo shirkad ganacsi. Waxaan nahay koox firfircoon oo si taxaddar leh u xushay alaabada tayada leh ee loo soo bandhigi doono macaamiisheenna.
Tuuji tuubbada dhiig qaadista
Ururinta saamiga dhiiga kaadida xuunku waa horumar weyn oo lagu sameeyo hababka ururinta dhiigga ee dhaqameed. Sababtoo ah habraaca aruurinta dhiigga ayaa lagu dhammeystirayaa nidaam si buuxda isugu xidhan, suurtagalnimada faddaraynta dhiigga iyo infekshinka is-qaadsiinta ayaa guud ahaanba laga saaray; iyo sababta oo ah qaabdhismeedkeeda fudud iyo adeegsiga habboon, way fududahay in la faafiyo oo la dardargeliyo.
Tuubooyinka dhiiga qaada ee micro
Tuubooyinka dhiiga qaada ee micro-ga: waxay ku habboon yihiin ururinta dhiigga ee carruurta dhasha ah, dhallaanka, bukaannada ku dhaca qaybaha daryeelka degdegga ah, iyo bukaannada gubta daran ee aan u habooneyn ururinta dhiigga dhiiga ku jira.
Tani waa nidaam muunad ururinta dhiigga oo otomaatig ah kaas oo isku daraya safka, xulashada tuubooyinka caqliga leh, daabacaadda calaamadaynta, dhajinta iyo qaybinta. Nidaamku wuxuu ku xiran yahay shabakadda 'LIS / HIS' ee cusbitaalka, wuxuu akhriyaa kaarka caafimaadka bukaanka, wuxuu si otomaatig ah u helayaa macluumaadka la xiriira bukaanka iyo waxyaabaha tijaabada ah, wuxuuna beddelaa hababka duubista iyo sumadaha dhaqameed.
Tuubada Tijaabada Sanqadha ee Fayras
Waxay ku habboon tahay ururinta, qaadista iyo kaydinta shaybaarada fayraska. Fayraska ku hay meel aamin ah oo waqti dheer dhaceysa.
Shijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2013, wuxuu ku yaal No.95, County Yuanshi, Shijiazhuang City, Gobolka Hebei, Warshaduhu waxay u dhowdahay wadadda weyn ee weyn ee 107, Shirkadeena waa soo saare casriyeeysan ee tuubooyinka aruurinta dhiigga. iyo aaladda la tuuri karo. Shirkaddayadu waxay qiimeysaa anshaxa ganacsiga iyo tayada sare waxayna ku dadaashaa inay horumariso alaabada leh tayada ugu wanaagsan. Waxaan raadinaa badeecado iyo adeeg tayo sare leh oo loogu talagalay xirfad-yaqaannada baarista caalamiga ah oo aan higsaneyno inaan bixinno ballanqaad tayo leh oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan baaritaanka cudurrada.
Horeba shahaadooyinka CE iyo ISO 13485
Aqbal adeegga OEM & ODM
Afar khadad wax soo saar si ay u ilaaliso wax soo saar sare.
Kaqeybgal bandhigyo caan ka ah warshadaha, sida CMEF, MEDICA, CAAB CAAFIMAAD, iwm.
Ugu badnaan Bariga Dhexe. Afrika, Koonfurta Ameerika, Aasiyada Koonfur Aasiya iyo Koonfurta Aasiya.